Ntụgharị Uche – hoo!haa!!
MMỌNWỤ E KWESỊRỊ IJE NGA?
Ụbọchị ụka gara aga, ụbọchị Ista, ndị ọrụ nchekwa nwuchikọrọ mmọnwụ gbapụtara na Nkwọ Ụga n’agbanyeghị iwu Mkpọchi Obodo Gọọmenti Anambara Steeti tiri maka ọrịa koro. N’aka nke ọzọ, n’agbanyeghị mkpọchi obodo maka ọrịa koro, mmọnwụ Nkwọ Inyi na-akpa ike ma na enwekwara onwe ya aṅụrị. Ụfọdụ sị na mmọnwụRead More →
Ịnglandị: Nnyocha ọhụrụ ndị ọkachamara sayensị si na mahadum Oxford mere arụtụwo aka nke mbụ ya n’akụkụ DNA mmadụ nke na-eme ka ha bụrụ ndị akaekpe ma ọ bụ ndị aka nri. Ha gosikwara na e nwere ihe jikọrọ akụkụ DNA ahụ nakwa akụkụ ụbụrụ mmadụ na-ahụ maka asụsụ. TupuRead More →
Si n’aka Mazi Chukwudi Okeke Oge elu bu ala Ọsa, ọ na-eme Ndibo chọrọ ime emume iri jị, ndị nọ ná mba na-alata ụlọ. Igbo enweghị ótù mgbe ha ji awa ji n’ihi na obodo di ichie na ichie n’ala Igbo na-awa ji n’oge nke ha. Nnewi, iji ma-atụRead More →
Abalị iri n’atọ nke ọnwa Ọgọọst afọ ọbụla bụ ụbọchị ndị aka ekpe. Ndị mba ụwa wepụtara ụbọchị taa maka iji cheta ụmụ nwanne anyị ndị gbara iche. E ji ụbọchị a echeta ihe ha na-agabiga. Ihe nile a na-arụpụta bụ maka ndị aka nri e nweghị nke ndị akaRead More →
Legọs: Isi edemede m a bu maka ihe onye na elekọta ọdụ ụgbọ mmiri n’ala Naijiria bụ Nigerian Ports Authority (NPA) kwuru n’abali isi nke ọnwa ọgọọst, n’afọ a bu 2019. Nwanyị ahụ bụ Hajia Hadiza bu onye nọ n’isi oche Nigeria Port Authority ndị ọ bu ha na elekọtaRead More →
MGBUKASIAHỤ abụ isi mmebi? Ihe butere ajụjụ a bụ na ndị Uwe Ojii ala Naịjiriya ekwuola hoo!haa!! na ha agụpụwo ndị bu mgbukasịahụ na ndi isi mmebi na ndị ha agaghị enye ohere isonye na ewemnọrụ ha na-aga n’ihu ugbua. Ihe a bụ ajụjụ juru ọhaneze n’ọnụ kemgbe ọnụ na-ekwuru ndịRead More →
Mmọnwụ bụ ihe a na-akwanyere ugwu pụrụ iche n’Ala-Igbo. Kaosiladi, dịka omenala ndị ọzọ dị na be anyị si ádá ádà, ọ dịzị ka mmọnwụ enwechazịghị ugwu ka ọ bụ na mmọnwụ anaghịkwa akwanyezịrị onwe ya ugwu. N’ọnwa gara aga, Gọọmenti Enugwu Steeti nakwa ndị obodo kpebiri Mmachi amachiri mmọnwụRead More →
SIMINSOLA- ỌKWỌ ỤGBỌ ELU NWANYỊ Ebe asị na ana-esi n’ulọ mara mma pụta n’ama, ka mụ malite isi okwu m n’ihe na-eme na hoohaa. Ndi ogbakọ hoohaa na eme ihe asọmmpi itu ilu ugboro atọ kwa izu ụka ọbụla. Na mbụ asọmmpi a na-abụkarị njiri mara ụmụ nwoke. Mgbe ahụ,Read More →